Inona ny Fitiavana na Kimuntu? - AFRIKHEPRI
Inona ny Fitiavana na Kimuntu?
TheNy fitiavana dia fihetsika mifanaraka amin'ny fihetsiky ny sasany, na izay fihetsika izay mandeha amin'ny lalana tokony hatao.
Ity tsipika fitondra ity dia azo faritana amin'ny alàlan'ny lalàn'i Kimuntu (mina mia kumi), valiny tsara, eto
Manehoa fitiavana isaky ny mifanaja amin'ny olon-drehetra sy ny zava-drehetra eto an-tany, ny fahariana, ny natiora, ny rano, ny trondro, ny zavamaniry, ny karazam-biby isan-karazany. Ny olona, ​​mazava ho azy, io fanao io dia azo dinihina arakaraka ireo lalàna hafa manaraka, dia satria tsy maintsy ataontsika ao an-tsaina foana fa tsy misy izao tontolo izao raha tsy mipetraka ny olona (Hâta ba ntu) !
Miaina na miasa raha mbola ao amin'ny fahamarinana hatrany, avy amin'ity fitondran-tena manaraka ity, raha tsy mendri-pitokisana (Bukedika).
Ny miaina amin'ny alàlan'ny famelan-keloka mandrakariva ny zavatra azony atao amintsika amin'ny ratsy, avy amin'ny fitsarana tsy ara-dalàna, avy amin'ity lalàna ity dia maneho fangorahana (Lembami oti mulemvo wa mutima).
Miaina na mihetsika mandrakariva amin'ny fankatoavana ny lalànan'i Kimuntu (Tumamanu).
Hiaina na hanao asa foana amin'ny fahendrena (Nduenga).
Miaina na manao asa am-pahamarinana hatrany amin'ny rehetra: amin'ny toe-javatra iray ihany, tsy manome mihoatra noho ny an'ny hafa ho ohatra; Izany koa dia mampitombo ny fanahin'ny fizarana, ary koa ny firaisankina mba tsy hanome aina bebe kokoa noho ny hafa (Budedede).
Ny miaina miaina rehefa nianatra ny dikan'ny ratsy ary manapa-kevitra ny hanao zavatra tsy misy afa-tsy amin'ny fahatsarana fotsiny ihany, ny Kimuntu ary handrava tanteraka ny ratsy (Mvilukulu).
Miaina am-pahazotoana, izany hoe mahalala ireo lalàna rehetra ireo izay soratako eto (Luzabu).
Ataovy ny zavatra tena ilainao rehefa tsy ilainao izany, fa tsy aorian'izay, fa tokony hamela ny zava-drehetra amin'ny fotoanao (Ku tekela pele, ku landilandi pele).
Ny miaina mandrakariva amin'ny fahatsapana ny fahaiza-manavaka, amin'ny zava-drehetra na amin'ny toe-javatra rehetra, mba hanaovana izay ilaina, tsy misy, tsy dia kely kokoa (Nfonka).
Farany dia te-hanampy aho fa tsy te hanohitra ny safidy malalaka, noho izany ny fahalalahana manokana, ny hafa.
Ny isa ntalu sy ny vatan'olombelona nzutu ya muntu edition vaovao: ny isa ntalu sy ny vatan'olombelona nzutu ya muntu edition vaovao
tamin'ny 27 Mey 2020 8:00
Daty namoahana 2016-12-06T00:00:00.000Z
Isan'ny Pages 30
Ny tandindona ny voninkazo voaroy
“Teraka” tany Afrika Andriamanitra
Firenena momba ny firenena sy kolontsaina - Cheikh Anta Diop (Audio)